जवानीमै किन फुल्छ कपाल ? - अनलाइन डिजिटल समाचार : Shreepage TV
कोभिड महामारीमा विपन्नको सारथी बने सहयोगी संस्था
श्रीपेज १३ चैत्र २०७७
जवानीमै किन फुल्छ कपाल ?
डा. धर्मेन्द्र कर्ण, छाला रोग तथा सौन्दर्य विशेषज्ञ
नेपाली समाजमा कपाल फुल्नु अर्थात् सेतो हुनुलाई बुढ्यौली लागेको भनेर बुझ्ने गरिन्छ । तर, कपाल फुल्नेबित्तिकै बुढ्यौली नै लागेको भन्नु चाहिँ सही हुँदैन । आजभोलि कम उमेरमै कपाल फुल्नु धेरै नेपालीको साझा समस्या बनेको छ ।
उमेर पुगेपछि कपाल फुल्नु स्वाभाविक भए पनि कम उमेरमै कपाल फुल्ने समस्याले धेरैलाई सताउने गरेको छ । एसियाका देशमा मुख्य रूपमा दुई थरी रङका कपाल देख्न पाइन्छ, एक कालो र अर्को सेतो । नेपाली समाजमा सेतो कपालले बुढेसकालको संकेत गरेको बुझिन्छ भने कालो
कपालले जवान । तर, यो सत्य होइन ।
सानै उमेरमा कपाल फुल्न थालेको छ भने त्यसको पछाडि विभिन्न कारण हुन सक्छन् । कपाल फुल्नु वा सेतो हुनुको पछाडि विभिन्न कारण हुन्छन् । सामान्यतया उमेर जति–जति बढ्दै जान्छ, त्यति नै कपालको रङमा ह्रास आउँदै जान्छ, अर्थात् कपालको रङ खैरो वा सेतो हुँदै जान्छ । यो प्राकृतिक रूपमा हुने स्वाभाविक प्रक्रिया हो ।
तर, कम उमेरमा कपालको रङ अस्वाभाविक ढंगले परिवर्तन भएको छ वा हुन थालेको छ भने त्यसका पछाडि केही कारण वा समस्या छ भन्ने बुझ्नुपर्छ । तर, समस्या छ भन्दैमा डराइहाल्नु भने पर्दैन । समस्याको पहिचान गरी त्यसको उपचारमा लाग्नुपर्छ ।
सामान्यतया १० देखि ३० प्रतिशत कपालको रङ प्रत्येक १० वर्षमा कम हुँदै (ह्रास आउँदै) जान्छ । कपालको रङमा ह्रास आउँदै जाँदा सेतो हुने हो । एसियनहरूमा ३० वर्ष उमेर कटेपछि सेतो कपाल देखिन थाल्छ । यो प्रायःजसो महिला–पुरुष दुवैमा एउटै उमेरमा देखिन्छ । विभिन्न अनुसन्धानले ‘रुल अफ फिप्टी’ लाई बाहिर ल्याएको छ । यसअनुसार संसारमा ५० प्रतिशत जनसंख्यामा ५० वर्षको उमेरमा ५० प्रतिशत कपाल फुलिसकेको हुन्छ । पुरुषमा सबैभन्दा पहिला देखिने सेतो कपाल कन्चटमा र टाउकोको दायाँबायाँ हो भने टाउकोको पछाडिपट्टि सबैभन्दा पछि सेतो हुन्छ । त्यस्तै, महिलामा टाउकोको दायाँबायाँ पहिला सेतो देखिन्छ ।
मान्छेको शरीरभित्र निरन्तर रूपमा विभिन्न किसिमका मेटाबोलिक अक्सिडेटिभ प्रक्रिया चलिरहेको हुन्छ । यसले विभिन्न तत्त्व उत्पादन गर्ने गर्छ । जसले हाम्रो शरीरको मेलानोसाइटिस सेल्सलाई नष्ट गर्ने काम गर्छ । मेलानोसाइटिसको काम कपाललाई रङ दिनु हो । यसले कपाललाई कालो बनाउन मद्दत गरेको हुन्छ । मेलानोसाइटिसको उत्पादन उमेर बढेसँगै घट्दै जान्छ । त्यही कारण उमेर बढेसँगै कपालको रङ सेतो हुँदै जान्छ । कुनै कारणवश सानै उमेरमा मेलानिनको उत्पादनमा अवरोध आयो भने कपाल उमेर नपुग्दै सेतो भइदिन्छ ।
कालो कपालका आफ्नै फाइदा छन् । कालो कपालले मानिसको व्यक्तित्वमा प्रभाव पारिरहेको हुन्छ भने मानिसको आत्मविश्वासमा पनि यसले काम गरिरहेको हुन्छ । कालो कपालले हाम्रो छालालाई घामबाट जोगाउन मद्दत गरिरहेको हुन्छ । त्यस्तै, यसले विभिन्न संक्रमणबाट पनि बचाउन सहयोग गर्छ । कपालले शरीरका केही अंगलाई ढाकेर त्यस क्षेत्रलाई सुरक्षा प्रदान गरिरहेको हुन्छ ।
कालो र सेतो कपालमा फरक
सेतो कपालको वृद्धि र विकास निकै छिटो हुन्छ । यसको विकास कालोको तुलनामा चार गुणा छिटो हुन्छ । कालो कपाल रंगाउन पर्‍यो भने सामान्य रङले रंगाउन सकिन्छ भने सेतो कपाल रंगाउन कडा खालको रङ प्रयोग गर्नुपर्छ । वास्तवमा यस्ता रङ रासायनिक पदार्थले बनेका हुन्छन् । जो कपाल र छालाको लागि हानिकारक हुन्छ । त्यसले दीर्घकालीन असर पनि गरिरहेको हुन्छ ।
सेतो कपाल देखिने उमेर र कारण
३० वर्षपछि कपाल सेतो देखिन थाल्यो भने सामान्य मान्नुपर्छ । तर, ३० वर्ष पहिले नै सेतो कपाल देखियो भने त्यसलाई अस्वाभाविक अवस्था मान्नुपर्छ । यसलाई ‘प्री–म्याच्योर ग्रे अफ हेयर’ भनिन्छ । सेतो कपाल हुनुको पछाडि धेरै कारण हुन्छन् । मुख्यतया सानै उमेरमा कपाल फुल्यो भने त्यसको पछाडि वंशानुगत कारण हुन सक्छ ।
यसबाहेक अरू कारण पनि हुन सक्छ । पोषणको कमीले कपाल फुल्ने समस्या हुन्छ । त्यसै गरी, भिटामिन डी, भिटामिन बी–१२, जिंक, आइरन, क्याल्सियम लगायतको कमी हुँदा पनि कपाल फुल्न सक्छ । यसबाहेक निम्न कारणले पनि उमेर नपुग्दै कपाल फुल्न सक्छः
–दीर्घरोग र औषधिको सेवन
–रक्तअल्पता, थाइराइड तथा हर्मोनमा परिवर्तन हुनु
–एजिङ अर्थात् बढ्दो उमेर
–मदिरा, धूम्रपान, जंकफुड आदि खाँदा
–जथाभावी रासायनिक पदार्थको प्रयोग
–मानसिक तनाव अर्थात् डिप्रेसन
यी कारणमध्ये कुनै पनि कारणबाट कपाल सेतो हुन सक्छ ।
कस्ता व्यक्तिमा कपाल छिटो फुल्छ ?
आमाबुबाको कपाल चाँडै फुलेको छ भने उनीहरूबाट जन्मेका सन्तानमा कपाल फुल्ने समस्या हुन्छ । मद्यपान तथा धूम्रपानको अधिक सेवन गर्नेमा पनि चाँडै कपाल फुल्ने समस्या आउँछ । त्यसै गरी, कुनै पनि किसिमको दीर्घरोग जस्तैः मुटु, फोक्सो, मिर्गौला, पेटको समस्या आदि हुनेमा पनि छिटो कपाल फुल्न सक्छ । त्यस्तै, कपाल फुल्ने अर्को कारण हो, मोटोपन । अस्वाभाविक रूपमा मोटोपन भएमा पनि कपाल फुल्ने समस्या देखापर्न सक्छ ।
२५ वर्षभन्दा पहिला नै कपाल फुलेको छ भने माथिका यी विविध कारण हुन सक्छन् । त्यस्तो अवस्थामा बेलैमा रोगको पहिचानतिर लाग्नु उचित हुन्छ । कपाल सेतो भयो भन्दै विभिन्न रसायनयुक्त कपाल रंग्याउने प्रसाधन प्रयोग गर्नुभन्दा समस्याको पहिचान गरी उपचार गर्नेतर्फ लाग्नु बुद्धिमानी हुन्छ ।
सेतो कपालको उपचार हुँदैन तर कपाल सेतो हुनुको पछाडिको कारण पत्ता लगाएर त्यसको उपचार गर्ने हो भने यो समस्या धेरै हदसम्म हटेर जान्छ । कपाललाई कालो बनाउन विभिन्न रसायनयुक्त हेयर कलर प्रयोग गर्नु भनेको थप समस्या निम्त्याउनु हो । यसले क्षणिक रूपमा समस्याको समाधान गरेको त देखिन्छ तर त्यसले दीर्घकालीन असर गरिहेको हुन्छ । बरु, पोषणयुक्त आहार र घरेलु उपाय अपनाउनु बेस हुन्छ ।
त्यसै गरी, शरीरमा भिटामिन डी, भिटामिन बी–१२, जिंक, आइरन, क्याल्सियम आदिको कमी हुन नदिने, समय–समयमा शरीरको जाँच गराउने गर्दा समस्या पहिचान गर्न सकिन्छ । सन्तुलित आहार तथा एन्टी अक्सिडेन्टयुक्त खानेकुरा खानुपर्छ । गुणस्तरीय साबुन तथा स्याम्पू प्रयोग गर्ने, केमिकलयुक्त हेयर कलर तथा अन्य प्रसाधन भरसक प्रयोग बन्द गर्ने र कपाल फुल्नुको मूल कारण पत्ता लगाएर त्यसको उपचारतिर लाग्ने हो भने कपाल फुल्ने समस्या हट्दै जानेछ ।
मुलुकमा अर्काे न्यून चापीय प्रणालीकाे प्रभाव, साेमबारसम्म वर्षा र हिमपातकाे आँकलन
फोनिज प्रदेश १ अध्यक्षमा लामा चयन
युवाहरूलाई हाैसला बढाउँदै विराटनगरका मामाभान्जाकाे कृषि फार्म
जुम्लामा राहदानी बनाउने युवा बढे, अधिकांशकाे लक्ष्य विदेश जाने
विद्यालय बन्द निर्णय गर्न आज शिक्षा मन्त्रालयको बैठक बस्दै
गोदावरी खोला सफाई अभियान अब टोल टोलमा, खोला अतिक्रमण हटाएरै छोड्ने मन्त्री झाँक्रीको उद्घोष
आजदेखि साेमबारसम्म वर्षा र हिमपात, सुदूरपश्चिम र कर्णालीका धेरै ठाउँमा वर्षाकाे आँकलन